အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်(ပါမစ်) မလိုဘဲ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရန် ဥပဒေက ခွင့်ပြုပေး - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်(ပါမစ်)မရှိ၍ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မည်သည့်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်မဆိုဖြစ်စေ အသက် ၂၁ နှစ် သို့မဟုတ် ၂၁ နှစ်အထက်ရှိသူ မည်သူမဆို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ဩဂုတ် ၃၁ ရက် သန်းခေါင်ယံမှ စတင်ကာ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယခင်က တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်သားများအနေဖြင့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြစ်စေ လက်နက်တစ်လက်ကိုင်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်(လိုင်စင်) လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ ယင်းခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်တစ်ခုရရှိရန် ၎င်းတို့၏ လက်ဗွေများကို သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးပို့ရပြီး ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ သင်တန်းတက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၊ ထို့ပြင် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အောင်မြင်စွာဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပြီး ပစ်ခတ်မှုစွမ်းရည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုလည်းခံယူရကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်စ်မြို့ရှိ ဈေးဝယ်စတင်တာတစ်ခုတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသူသွားများအတွက် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို El Paso တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၅ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်စဉ် ချိတ်ဆွဲထားသော လက်ဝါးကပ်တိုင်များအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကို ပြီးခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်အတွင်းက ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ လက်နက်ဥပဒေ၏ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြဌာန်းချက်အရ တရားဝင်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြစ်စေ ခွင့်ပြုမိန့်လိုင်စင် သို့မဟုတ် သင်တန်းလေ့ကျင့်မှု မလိုဘဲ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသော ကန့်သတ်ချက်မှာ သင့်အနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအတွက် ပြစ်မှုကြီးကျူးလွန်ခဲ့သူ သို့မဟုတ် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသူ မဖြစ်စေရဟု ပြဌာန်းပါရှိကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့် KTRK က ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်ထဲတွင် သင်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်အား ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင် ၊ သေစေအောင် ပစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားလျင်ဖြစ်စေ ၊ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှု သို့မဟုတ် လက်နက်ဖြင့် ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်ခဲ့လျင်ဖြစ်စေ လက်နက် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ဟု သတင်းက ဆိုသည်။
ဥပဒေအရ အများပြည်သူလုံခြုံရေးဌာနက ဖွင့်လှစ်သော လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုကို တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၊ သို့သော် ယင်းမှာ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း သတင်းတွင်ဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်လည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိသည် / မရှိသည် ဆိုသည့်စည်းမျဉ်း ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၊ လက်နက်ဥပဒေသစ်က ယင်းနေရာကန့်သတ်ချက်များကို မည်သည့်ကင်းလွတ်ခွင့်မှ ပေးထားခြင်းမရှိကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
ကွဲပြားခြားနားမှုမှာ တက္ကဆက်စ်မြို့တွင် လိုင်စင်မဲ့ သေနက်ပိုင်ရှင်များအား တားဆီးရန်အလို့ငှာ လက်ရှိအရောင်းဆိုင်များတွင် အင်္ဂလိပ် နှင့် စပိန် နှစ်ဘာသာစလုံးဖြင့် အမှတ်အသားများကို ရေးသားဖော်ပြရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ လက်နက်ဥပဒေသစ်အရ တတိယအမှတ်အသားတစ်ခုကိုပါ မဖြစ်မနေထည့်သွင်း ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်ပေးသူများအပါအဝင် လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းအားနည်းချက်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။ “ လက်နက်ကိုင် ဆောင်ခွင့်ဥပဒေအရ ဘယ်သူမဆို သေနတ်ကိုင်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့သူတို့ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းလည်း ပြုလုပ်လို့ မရဘူး ၊ ဒါဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ပြဿနာရှိပါတယ်” ဟု ဟူစတန်မြို့ရဲအရာရှိအသင်း ဥက္ကဌ Douglas Griffith ကဆိုသည်။
“ ဒါက ဘာသင်တန်းမှ မတက်ထားသူတွေကို သေနတ်ကိုင်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ လျှောက်သွားခွင့်ပေးထားတာပါ ၊ ပြည်သူအားလုံးအတွက် အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့ဗျာ ” ဟု Griffith က ပြောကြားခဲ့သည်။
တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်သည် အရိုင်းဆန်သောအတိတ်ကာလဆီသို့ပြန်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသောအခြေအနေများကြုံတွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်ရှိ အချို့သော လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးပညာပေးလှုပ်ရှားသူများက ပူပန်နေကြသည်။ ဥပဒေသစ်အရ ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ရောင်းချခြင်း အရောင်းမြှင့်တင်မှုများ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့နေရသည်။ Texas Gun Sense ဝက်ဆိုက်ဖော်ပြချက်အရ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း သေနတ်ပစ်ခတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်၍ သေဆုံးသူပေါင်း ၃,၆၈၃ ဦးရှိခဲ့သည်။ တက္ကဆက်စ်မပါ အခြားသော အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ် ၁၉ ခုတွင် အချို့ကန့်သတ်ချက်ပုံစံများဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်(ပါမစ်) မလိုဘဲ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း နှင့် တက္ကဆက်စ်မှာမူ လက်ရှိတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာများက ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။(Xinhua)
Law allowing permitless carry of handguns to go into effect in U.S. Texas
HOUSTON, Aug. 31 (Xinhua) — Starting at midnight on Tuesday, anyone aged 21 years or older can carryahandgun withoutapermit or any training in U.S. state Texas.
Currently, Texans have to be licensed to carry, openly or concealed,ahandgun. And to obtain suchalicense, they have to submit their fingerprints, receive4to6hours of training, complete and passawritten exam andashooting proficiency test.
These procedures will be abandoned in justafew hours. Under the state’s “constitutional carry” gun law which goes into effect on Sept. 1, people who legally ownafirearm can carry it openly or concealed in Texas with no permits or trainings required.
The only restriction is that you must be legally allowed to ownagun. That means you cannot haveafelony oraconviction for domestic violence, according toareport from local media outlet KTRK.
The law also prohibits open carry if you are convicted of assault causing bodily injury, deadly conduct, terroristic threats or disorderly conduct withafirearm, said the report.
he law does require the Department of Public Safety to offerafree online gun safety course, which is not mandatory, the report added.
However, there are still rules on where people can and cannot carry, and the new gun law does not grant any amnesty for these occasions, said the report.
The difference is that currently businesses in Texas have to post signs in both English and Spanish to exclude unlicensed firearm owners. From Sept. 1, they will be requiredathird sign under the new law.
The lack of training worries some, including those who run gun ranges, according to the report.”Constitutional carry means anyone can carryagun and we cannot question them, which should beaproblem to everyone,” President of the Houston Police Officers’ Union Douglas Griffith said.
“It is allowing those untrained individuals to walk around withafirearm. It is detrimental to the entire public,” said Griffith.Texas may return to its Wild West past, or even worse, some gun control advocates in Texas lamented. The new law is seen asaheavy blow for the promotion of gun safety in the state.
According to the website run by Texas Gun Sense, there were 3,683 gun-related deaths in 2019 in the state.Excluding Texas, 19 other U.S. states have adopted some form of permitless carry and Texas is by far the largest, according to loca media reports.
(1) Guns are displayed at the two-day gun show organized by Dallas Arms Collectors Association in Dallas, Texas, the United States, Nov. 30, 2019. (Photo by Dan Tian/Xinhua)
(2)Crosses with names of victims are placed near the Walmart center whereamassive shooting took place, in El Paso of Texas, the United States, on Aug. 5, 2019. (Xinhua/Wang Ying)